Myanmar, Norway holds 1st Foreign Office Consultations in Nay Pyi Taw – Ministry of Foreign Affairs
Myanmar, Norway holds 1st Foreign Office Consultations in Nay Pyi Taw
The 1st Myanmar-Norway Foreign Office Consultations was held on3December 2019 at the Ministry of Foreign Affairs in Nay Pyi Taw.
The meeting was cochaired by U Soe Han, Permanent Secretary of the Ministry of Foreign Affairs and Ms Marianne Hagen, State Secretary of the Foreign Affairs of Norway.
During the meeting, the two sides cordially exchanged views on promotion of bilateral relations, and reviewed and explored ways to foster the complete range of bilateral cooperation including trade and investment, telecommunication, electricity and energy, natural resources management, climate change, environmental conservation and development cooperation.
The Permanent Secretary also appraised on the Government’s priorities and ongoing efforts for peace and national reconciliation and recent developments in Rakhine State.
They also exchanged views on matters pertaining to closer collaboration in regional and international fora particularly in the United Nations, ASEAN and Asia-Europe Meeting (ASEM).
ပထမအကြိမ် မြန်မာ-နော်ဝေ နှစ်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနများအကြား ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပခြင်း
ပထမအကြိမ် မြန်မာ-နော်ဝေ နှစ်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနများအကြား ဆွေးနွေးပွဲကို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နေပြည်တော်၌ ၃-၁၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲကို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးစိုးဟန်နှင့် နော်ဝေ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး H.E. Ms Marianne Hagen တို့က ဦးဆောင် ကျင်းပခဲ့ကြသည်။
ဆွေးနွေးပွဲတွင် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးတိုးမြှင့်ရေး၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကဏ္ဍ တို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ကာ ဆက်လက်တိုးချဲ့နိုင်မည့် နည်းလမ်းများအပေါ် ဆွေးနွေးအမြင်ချင်း ဖလှယ်ခဲ့ကြသည်။ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်က နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ ဦးစားပေး ဆောင်ရွက် လျက်ရှိသည့်ကဏ္ဍများ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် အစိုးရ၏ ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု အခြေအနေတို့ကိုလည်း ရှင်းလင်း အသိပေးခဲ့သည်။
ထို့ပြင် ကုလသမဂ္ဂ၊ အာဆီယံနှင့် အာရှ-ဥရောပအစည်းအဝေး စသည့် ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ ဆွေးနွေးပွဲများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေးကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍လည်း ဆွေးနွေးအမြင်ချင်း ဖလှယ်ခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရသည်။